Iningi lezingane libheke esikoleni, emndenini nakubangane, kodwa kukhona nalabo abaye baphendukela izifiso zabo nezenzo zokuzilibazisa zibe yimpumelelo yokuqala. Nazi izingane ezingu-25 ezingamanga nje kuphela ibhizinisi eliphumelelayo, kodwa futhi zathola izigidi zazo zokuqala ngaphambi kokuba ziphothule esikoleni.
Lapho eneminyaka engu-14 ubudala, u-Ashley Qualls uqalise iwebhusayithi eyakhelwe ukusiza izingane zonyaka wakhe ukuba zakha amakhasi amahle wokuxhumana nomphakathi futhi zifunde ulwazi oluyisisekelo lwe-HTML. Le ndawo yayithandwa kakhulu kangangokuba le ntombazane yathola izinhlinzeko eziningana, phakathi kwayo kwakukhona nesamba samadola ayizigidi ezilodwa nengxenye kanye nemoto ngokukhetha kwakhe kumthengi ongaziwa.
Ukholwe noma cha, uJohn Koon wavula izingxenye zokuqala zezimoto ze-auto eNew York lapho eneminyaka eyishumi nesithupha kuphela. Kuningi izigidi ezitholakale lapho inkampani yakhe yaba omunye wabahlinzeki abakhulu bezingxenye zomzila owaziwa nge-MTV "Wheelbarrow for pumping." Wasebenzisa ukuxhumana kwakhe ukuvula inkampani yokugqoka, eyathola amanye amadola ayizigidi ezingamashumi amane.
Ngo-1994, umfana oneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala, uCameron Johnson, wavula inkampani yekhadi lesibingelelo. Ngesikhathi isikole sesiphelile, uJohnson waqala ukukhangisa kanye nokuhlelwa kwe-inthanethi, okwamlethela imali engama-dollar ayizinkulungwane ezingu-400 ngenyanga.
U-Adam Hildret wavula inkampani yakhe yokuqala ngo-1999, lapho eneminyaka eyishumi nane. Inethiwekhi yezokuxhumana yaseBrithani iye yaba enye yezingosi ezincane kunazo zonke futhi manje izikhundla ngokwazo njenge "i-agent marketing agency". Manje uHildreth uyinhloko yenkampani ekhethekile ekuthuthukiseni ubuchwepheshe ukuvikela izingane kwi-Inthanethi.
I-Evan evela ku-YouTube
Ngosizo lukayise, u-Evan oneminyaka engu-8 ubudala wavula isiteshi sakhe se-YouTube, lapho ehlola amathoyizi wezingane futhi exoxa ngezihloko ezithandayo izingane zeminyaka yakhe. Unyaka ngamunye, lesi siteshi simlethela cishe amaRandi ayizigidi ezingu-1.3.
Lapho eneminyaka eyishumi ubudala, uJuliette Brindak waqala ukudweba abalingiswa bakhe abaqanjiwe, okwaholela ekwakhiweni kwenethiwekhi yokuxhumana nabantu abasha ngesikhathi eseneminyaka eyishumi nesithupha. Ngokusho kochwepheshe, inkampani yakhe manje ibiza u-$ 15 million.
UTyler Dickman waqala ibhizinisi lakhe lapho eneminyaka emihlanu nje kuphela. Wathengisa i-lemonade, izitshalo zokugqoka, izingane ezinakekelwayo futhi wabonisa ukusebenza kwemilingo. Ngesikhathi eseneminyaka eyishumi nesishiyagalolunye, wayesevule imishini yakhe yokukhanda ikhompyutha. Eminyakeni emibili kamuva, ngonyaka ka-2001, inani lalo lifinyelele uphawu lwezigidi eziyizigidi zamaRandi.
U-Christian Owens ngokwakhe wafunda uhlelo ngokutadisha esikoleni esiphakeme. Lapho eneminyaka engu-14 ubudala waqala inkampani yakhe. Njengengxenye yemisebenzi yakhe, wanikeza izixazululo ezilula futhi ezingabizi kakhulu ohlelweni lokusebenza lwe-MacOS.
Ngenkathi eneminyaka eyishumi nanhlanu ubudala, u-Adam Horwitz wabeka umgomo: ukuba abe yindlalifa ekupheleni kwakhe kwezinsuku ezingu-21. Ngemva kokusungula izingosi eziningana, ekugcineni waphumelela ngesicelo eseluleka abantu ukuthi benze kanjani inzuzo emakethe yesicelo eselula.
UDavid noCatherine Cook
UDavid noCatherine Cook bangabalandeli benethiwekhi yezenhlalo ethandwayo, esekelwe kusikole lapho abantwana baya khona noma baya kuwo. Ngo-2011, leli sayithi lihlanganiswe nelinye elifanayo, futhi manje umkhiqizo wokugcina usiza izingane ukuthola abangane bomoya futhi zixoxe nabo kumadivayisi eselula.
U-Nick D'Aloisio wafunda uhlelo ngesikhathi eneminyaka engu-12 ubudala, futhi ngo-17 waqala uhlelo olususelwa ku-algorithm yokuveza okuzenzakalelayo. Wathengisa isicelo sakhe ku-Yahoo for $ 30 million.
Umfana oneminyaka eyishumi nesithupha ubudala waseM Mumbai Farhad Asidvalla uboleke amadola ayishumi kubazali bakhe futhi wavula inhlangano yakhe yokuthengisa. Manje uneminyaka eyizigidigidi, umtshali zimali kanye nomethuli esiteshini sethelevishini iTedX.
Lapho eseneminyaka eyishumi, uMaddie Bradshaw wayefuna ukuhlobisa isikhala sakhe esikoleni. Kodwa njengoba imakethe yayingenakho ukuthi intombazane ingaba nesithakazelo ngani, yaqala ukwenza izicwebezi ngokwayo. Ngenxa yalokho, waba ngumsunguli nomongameli wekampani yakhe yokuklama, okwaba yi-dollar eningi yenhlangano.
Ngo-2001, uSean Belnik wavula enye yezitolo zokuqala ezithengisa ifenisha yehhovisi. Ngo-2005, inkampani yathola inzuzo eyizigidi ezingu-13,6 ngonyaka kanti isebenza ngokuphumelelayo.
URyan Kelly ungenye ingane ekhule ngokucebile ngenxa yokusebenza kwayo. Lapho eneminyaka eyishumi nesishiyagalolunye, uRyan waqala ukwenza inja yakhe, wabe esekwazi ukuphetha isivumelwano esikhulu. Inkampani yakhe isebenza kuze kube yilolu suku.
U-Isabella Barrett wathola udumo ngenxa yesibonakaliso sangempela esithi "Abantwana Nezingane", ngemuva kwalokho wabeka inkampani yakhe ekukhiqizeni ubucwebe bezimpahla zokugqoka kanye nezembatho ezifashisayo, ngaleyo ndlela waba ngumholo wezigidi eziyisishiyagalolunye.
Lapho eneminyaka eyisithupha ubudala, u-Kiova Kavovit wabonakala kuthelevishini ukuze akhulume ngokusungulwa kwakhe - i-plaster engasetshenziswa efomeni elilodwa ngqo kwilonda. Wathola utshalomali wamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-100 futhi manje uxoxisana nenkampani enkulu ekukhiqizeni amabhande okunamathisela.
Lapho eneminyaka engu-14 ubudala, uFraser Doherty waqala ukwenza i-jam ngokusho kokupheka kukagogo. Lapho eneminyaka engu-16 ubudala washiya esikoleni ukuze agxile ebhizinisini lakhe.
Le ntombazane eneminyaka engu-11 yathatha iresiphi ye-lemonade evela kumakhulu angaphansi kuka-ugogo wayo, futhi yabonakala kuthelevishini futhi manje ithengisa imikhiqizo yayo ezindaweni ezingaphezu kwama-50 e-US. Uyinikeza ingxenye yengeniso yakhe ezinhlanganweni ezibhekana nokuqothulwa kwezinyosi.
Lapho uRobert eneminyaka engu-14 ubudala, waba nesisindo somhlaba wonke, wakha umdlalo we-Bubble Ball, owakhulisa amadola amabili wezigidi emavikini amabili. Manje uNey unenkampani yakhe futhi uyaqhubeka nokuthuthukisa imidlalo.
Lapho eneminyaka engu-15 ubudala, uMadison Robinson wavula inkampani yakhe ekukhiqizeni amasinki. Ekuqaleni, igxile ekuklanyeleni kwentsha, kodwa yaqala ukumboza izilaleli eziningi, yandisa ububanzi futhi yakha uhlelo olwengeziwe lwebhizinisi layo.
Njengabanye abantwana abaningi, uJack Bonnot waqala ukuthengisa i-lemonade lapho eneminyaka eyisishiyagalombili. Nokho, emzamweni wakhe wahamba kakhulu kunezingane eziningi, futhi wavula ibhizinisi lakhe. Inkampani yakhe isekela ezinye izingane ezifuna ukuthola imali ngokuzisiza ukuba zithole amalayisense adingekayo, izimvume nempahla.
U-Farra Grey wavula ibhizinisi lakhe lokuqala lapho eneminyaka engu-13. Ngonyaka odlule, inkampani yakhe yayinganiselwa ku-1.5 million zamaRandi. U-Farra manje usomali-zimali, umbhali, umlobi wekholomu nesiphakamiso esishukumisayo.
UCorey Nives wavula ibhizinisi lakhe ngo-2009 - waqala ukuthengisa i-cocoa, amabhisikidi kanye ne-lemonade. Ngeshwa, isikhungo sakhe sivaliwe ngumnyango wezempilo. Wenzani lo mntwana? Wabe esemthethweni ibhizinisi lakhe, wadala izindlela zokupheka futhi manje ungumengameli oneminyaka eyishumi wenkampani egcwele.
Lapho eneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala, uGabriel Jordan wavula ibhizinisi lakhe lokuqala, wabe esedala enye inkampani esiza osomabhizinisi abasha ukuvula ibhizinisi labo.
Ukuqoqwa kokuqala kwezimali
Amakhadi we-Maestro - inhlanganisela enhle yezindleko nokusebenza
Yini engasindiswa? Ungabeka kanjani isabelomali ngendlela efanele?
"Sinekod" izingane kanye nabantu abadala: wokusiza ngokushesha izimpawu ezingemnandi
Izimbali izihlahlana ne kwentwasahlobo kwekwindla
Gazebos nezinhlobo zalo. pergola Ngokhuni ne izoso, izoso
Umthetho ophathelene nezinkampani ezenza izintela nezimali: i yenele
Indlela hlola emgqeni enkulisa? Cheboksary ukunikeza e-service